तस्बिरको महत्त्व र फोटोग्राफरको संघर्ष
क्यामेराको क्यानभास चलाएर तस्बिर सिर्जना गर्ने सम्पुर्ण फोटोग्राफरहरु लाई विश्व फोटोग्राफी दिवसको सर्वप्रथम हार्दिक हार्दिक शुभकामना ।
हरेक वर्षको अगस्ट १९ तारिख अर्थात आजकै दिनमा मानिसहरुलाई फोटोग्राफीको इतिहास बुझाउन, यसमा रुचि राख्ने मानिसहरुलाई प्रोत्साहन गर्न र व्यवसायिक रुपमा फोटोग्राफी गरेर बसिरहेका मानिसहरुको सम्मान गर्न विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाइन्छ। आजको दिन विश्वभरका फोटोग्राफरहरुले आफुले खिचेका केहि उत्कृष्ट फोटोहरु दुनिया सामु प्रस्तुत गर्ने गर्दछन्।
फोटोग्राफर भन्नाले दिनभर हातमा क्यामेरा बोकेर, विभिन्न ठाउँ घुम्दै उत्कृष्ट तस्वीर निकाल्ने या फोटोग्राफीलाई नै आफ्नो व्यवसाय बनाउने मानिस भने पक्कै हैनन्। अहिले सबैको हातमा भएको मोबाइलले खिचेको फोटोले पनि थुप्रै भाव बोक्न सक्छन। तस्वीरलाई स्तरीय उच्च पिक्सेल भएको क्यामराले मात्र बनाउछ भन्ने बुझाइ राख्नु गलत हो ।
संसारमा सबैभन्दा पहिलो तस्वीर सन् १८२६ मा फ्रान्समा खिचिएको थियो। त्यसबेला जोसेफ नाइस्फ़ोर नाइप्सीले हेलियोग्राफीको सहायताबाट पहिलो तस्वीर खिचेका थिए। हेलियोग्राफी भनेको पनि फोटोग्राफीकै एक प्रक्रिया हो। त्यतिबेला एउटा तस्वीर खिच्न निक्कै समय लाग्थ्यो ।
सबै भन्दा रोचक कुरा त के हो भने सायद कसैले पुरानो फोटोमा हासेका मान्छे कहिले भेट्दैन थिए। किनकि धेरै समय लाग्ने कारण सबैले आफ्नो हासो थामिराख्न सक्दैन थिए। त्यसबेला देखि अहिले सम्म फोटोग्राफीको तरिका र स्तरमा राम्रो परिवर्तन भएको छ।
तस्बिर पनि एक किसिमको अभिव्यक्ति हो । फोटोग्राफीको यो विकासले थुप्रै इच्छुक मानिसहरुलाई अभिव्यक्त हुन मदद पुर्याएको छ। सामाजीक सञ्जालले पनि यसमा ठुलो भूमिका खेलेको छ। अहिले सामाजीक सञ्जालको अवस्था यस्तो भएको छ कि विश्वभर एक मिनेट मै पनि लाखौ फोटोहरु कुनै न कुनै माध्यमबाट अपलोड भैरहेका हुन्छन्।
तस्बिर एउटा यस्तो चिज हो जसले पुरानो यादहरुलाई फराकिलो बनाइदिन्छ । हिजोको समय गैसक्यो । हामीले हिजो खिचेका तस्बिहरु हेर्दा आज जस्तो लाग्छ । अनि फेरि तेही उमेरमा र तेहि परिवेशमा फर्किउ जस्तो लाग्छ । तर यो सम्भव छैन । समय गतिशील छ । तस्बिरहरु यस्ता चिज हुन जो एउटा कालान्तर देखि अर्को कालान्तर सम्म मिठो अनि संमधुर याद बनेर बसिरहन्नछन् ।
केही तस्बिरहरुले इतिहास बोकेका हुन्छन् । केही तस्बिरहरुले याद बोकेका हुन्छन् । केही तस्बिरहरुले माया बोकेका हुन्छन् । केही तस्बिरहरुले भाव बोकेका हुन्छन् ।
हामी कस्ता थियौं ? समय कस्तो थियो ? हाम्रो ठाउँ अनि परिवेश कस्तो थियो त ? र अहिले समय परिवर्तन संगै हामी कस्ता भएका छौं त ? तस्बिरहरुले हामीलाई केही सोच्न बाध्य बनाइदिन्छन् । बस तस्बिरलाई हेर्ने र पढ्ने हाम्रो नजरिया कस्तो छ यो कुरा हामीमा भर पर्छ । एउटा तस्बिरका अगाडि हजारौं शब्दहरु फिक्का लाग्छन् । भनिन्छ ” तस्बिर आफै बोल्छ” ।
तस्बिर खिच्न हामीले भनेको जस्तो, सोचेको जस्तो सजिलो छैन । एउटा फोटोग्राफरले हरदम एउटा राम्रो तस्बिर खिचेर अनि त्यसलाई बाहिर प्रस्पोटन गर्ने माध्यम पनि खोजिरहेको हुन्छ । तस्बिर खिच्दा आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर बिहान देखि साझसम्म कहिले खोलानाला, वनजंगल, पहाड, लेकबेशी, भिरपाखा कता हो कता जानूपर्ने हुन्छ ।
फोटोग्राफरले जहिले राम्रो लोकेसन हेर्छ, कताबाट फोटो हानेपछि राम्रो आउछ त्यो पनि उसको संघर्ष हो । फोटोग्राफरले सधै अरुका फोटा खिच्छ उसलाई त्यसैमा रमाइलो हुन्छ । किनकी उ अरुका फोटा र दृश्य खिच्नमा रमाउछ । तर आफ्ना फोटा अरुले खिच्दा चित्त बुझेजस्तो हुँदैन् ।
जब केही फोटोहरु बाहिर आउछन् केही ब्याक्तीहरुले अन्य ठाउँमा तस्बिर अपलोड गर्नुहुन्छ । कतिले तस्बिरको क्रेडिट खुलाइ दिनुहुन्छ कतिले खुलाउनु हुदैन । कतिले त्यो तस्बिरको मजाक बनाइदिनु हुन्छ । कतिले त्यो तस्बिरको तारिफ बढाइदिनु हुन्छ । कतिले त्यो तस्बिरलाई अन्य कुरा सँग तुलना गरेर मनोबल गिराउने काम गरिदिनुहुन्छ ।
खयर जे जस्तो होस् । अबका दिनहरुमा तस्बिरको महत्त्व के र कति छ ? भनेर सबैले बेलैमा बुझ्न नितान्त आवश्यक देखिन्छ । विश्व फोटोग्राफी दिवसको सबैलाई फेरी पनि शुभकामना ।
लेखक लेकाली अनलाइनका फोटोग्राफर प्रमुख हुन् ।
प्रकाशित मिती २०७६ भाद्र २ गते
प्रकाशित मिति : २०७६ भाद्र १ गते आइतवार